IVilla Massa, eRiad ngaselwandle
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguDidier
Ifakwe kwindawo ye-UNESCO yeLifa leMveli yeeNyoni zeLifa leMveli, edibanisa iiflamingo, iititi eziluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nama-bis anentloko enempandla, le villa ijonge ulwandle kunye nolwandle oluzikhilomitha ezisi-7 ubude. Ihonjiswe ngomanyano olufihlakeleyo lweMoroccan kunye nezitayile zangoku. I-Ryad ingahlalisa ukuya kuthi ga kwi-10 abantu. inika amagumbi okulala ama-5 aneen-suite ezi-5 zokuhlambela zonke ezinombono wolwandle. Igumbi lokuhlala elikhulu lonwabela indawo yomlilo emnandi yangokuhlwa.
Ngaphaya koko, i-villa inechibi elimangalisayo eli-14 leemitha ubude, elinokufudunyezwa.
Kwimeko apho ilizwe lakho okanye ummandla wakho ungavumeli ukuza kwi-villa yethu ngexesha leeholide zakho, ngenxa yemilinganiselo yococeko, uya kubuyiselwa ngokupheleleyo.
Ngubani onokucinga ukuba uyayifumana, i-60km nje emazantsi e-Agadir, le kona incinci yeparadesi enombono wesiphelo sehlabathi? Ukanti oku akuyondlwan’ iyanetha. Ifakwe kwindawo yogcino lwendalo yaseSouss Massa, le villa ibonelela ngayo yonke intuthuzelo kunye nokuzola kwamaphupha akho eholide yakho.
Isidlo sasemini kwithafa elikhuselwe elangeni ngokuyonwabela umbono omangalisayo wolwandle kunye netheku elineenduli zesanti ezibugolide.
Iiyure ezishushu, zihlaziye ngokuntywila echibini labucala elingenasiphelo, okanye ungene elwandle ezantsi kwe-villa, kwaye wonwabele ukuzola okuxutywe nesandi samaza ngokunikela i-nap kwikona yomthunzi.
Kwimeko yemveli, yonwabela zonke izinto zale mihla: izikrini zeTV ezisicaba, umyili wangoku kunye noxhotyisiweyo ngokupheleleyo (umatshini weNespresso, i-oveni, ihob), uqhagamshelo lwe-wifi, umoya womoya, njl.
Iivillas ezimbalwa ezilandelayo kubuhle obuqhelekileyo baseMoroccan kunye nolwakhiwo lwabo lufundwe ngononophelo ukuze kudityaniswe nembonakalo entle yomhlaba, iVilla Massa ihonjiswe ngomdibaniso ochuliweyo weMoroccan kunye nezitayile zangoku.
I-villa nayo ixhamla kwinkonzo yehotele (ukucoca imihla ngemihla, ilinen kunye neetawuli ezibonelelweyo, kunokwenzeka ukuba ihotele inkonzo yegumbi likaKsar Massa kwi-villa, kuyenzeka kwakhona ukuba ufumane iinkonzo zompheki olungiselela ukutya okugqwesileyo kweMoroccan.).
Uya kufumana kwi-Villa:
Itafile ye-ping-pong ebekwe kwithafa legumbi eliphindwe kabini lesihlomelo, inokuhanjiswa nokuba kwi-patio okanye kwi-terrace yechibi (ungalibazisi ukucela uncedo lwabasebenzi behotele)
Iireyithi zentenetya elunxwemeni.
Iibhola zePétanque, intsimbi yomhlaba eziimitha ezimbalwa ngaphezulu kweVilla kunye neplastiki yonxweme.
Zonke izixhobo zomdlalo zigcinwe kwishelufu engaphezulu kwefriji/igumbi lokuhlambela impahla.
Inethiwekhi yeWiFi isesandleni sakho kwivilla.
Ukuba ufuna ukwenza umlilo eziko, unokuyalela iinkuni kuHoucine umqhubi weenkamela, uya kuyizisa kuwe ngenkamela.
UKUHLALA NGAPHEZU KWEVEKI ENYE, Izaphulelo zivunyiwe, NCEDA UQHAGAMSHENE NATHI KWESI NDAWO.
I-Massa kunye neendawo eziyingqongileyo zibonelela ngezinto ezininzi ezithatha iintsuku zakho ngokupheleleyo: izifundo zokusefa, ukuhamba, ibhayisekile okanye inkamela. Ihotele edityanisiweyo ikwanikezela ukuba ungcamle ukutya kwayo okumnandi kwaseMoroccan okanye ukonwabele umzuzu wokuphumla kwi-Spa yayo (i-massages, igumbi lomphunga, i-jacuzzi). Okokugqibela, abadlali begalufa bayakonwabela iikhosi ezintle eAgadir (60 km).
* Kunandiphe ukuphuma okanye ukutshona kwelanga, ubuhle bomyezo wendalo waseMassa, otyalwe ngeengcongolo, imimosa nemithi yesundu, nekhaya leehektare ezingaphezu kwe-130 000, phantse iindidi ezingama-250 zeentaka ezifudukayo.
* Endleleni ebuyayo, khetha iintlanzi ezisandul’ ukubanjiswa uze uzithengise enqanaweni.
* Unxweme olukhulu olunesanti olunabela elundini phayaa.
* Ukuhambahamba ngeziqholo kunye ne-haggle, iziqhamo, imifuno kunye nezinye iincasa zaseMoroccan eziqhelekileyo kwaye ngaphandle kwabakhenkethi uMassa (ngoLwesibini) kunye neBelfaa (ngeCawa).
* Yazi izithandwa zethu ezimbini, u-Ibrahim inkamela kunye nemazi yemazi. Kwaye kunye nabo, ukuya ezantsi elunxwemeni, ukuhambahamba okanye ukugabavula ...
* Ukuphonononga ezona lali zintle kunye neendawo ezingqongileyo: iTifnit (35 km), ilali yokuloba eyinyani enezindlu zayo zomqolomba, iTiznit (45 km), idolophu encinci yaseMoroccan eneendonga zayo ezintle ze-adobe, edume ngobucwebe bayo beBerber souk ephithizelayo ngoLwesine. ; Intlambo yobusi kunye neParadesi (i-80 km), isixeko sasebukhosini saseTaroudant (i-100 km) kunye nentliziyo ye-Anti-Atlas, idolophana yaseTafraout, imise inkampu kwintlambo yase-Ammeln, iintaba ezintle ze-granite ezipinki (i-145 km).
kunye neMarrakech kunye ne-Essaouira (i-280 km) ngeeyure ezi-3 zokuhamba ngeeyure.
Umbuki zindwendwe ngu- Didier
Siyakwamkela iindwendwe zethu kwi-villa ukuba zinikeze izitshixo, zichaze indlela izixhobo ezahlukeneyo (iTV, i-intanethi, izixhobo zombane, ...) kwaye ubanike iingcebiso zokutyelela ummandla.